Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland oo si adag uga hadlay dad lagu laayey deegaanka Saameel | Berberanews.com
Home WARARKA Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland oo si adag uga hadlay dad lagu laayey...
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland oo si adag uga hadlay dad lagu laayey deegaanka Saameel
Ceerigaabo-(Berberanews)- Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Jamhuuriyadda Somaliland Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cabdiraxmaan-Cirro), ayaa cambaareeyey dil qudha lagaga jaray saddex qof oo laba ka mid ahi is-dhaleen oo xalay ka dhacay deegaanka Saameel oo u dhexeeya degmada Baki ee Gobolka Awdal iyo Gabilay.
Cabdiraxmaan-Cirro waxa uu Hay’adaha dawladda ee dhinaca ammaanka inay gacanta ku soo dhigaan gacan-ku-dhiigleyaasha xalay saddexda qof ku dilay deegaanka Saameel ee degmada Baki ee gobolka Awdal. Guddoomiyaha Golaha Wakiillada ahna Guddoomiyaha ku-meel-gaadhka ah ee Urur-Siyaasadeedka WADANI Md. Cirro oo maanta labadii Duhurnimo Shir Jaraa’id ku qabtay magaalada Ceeri-gaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo uu safar ku joogo kaga hadlay dilkaas.
“Waxaannu tacsi u diraynaa qoysaskii ay ka geeriyoodeen saddexdii muwaadin ee shacbiga ahaa ee xalayto lagu miray Saameel oo ka tirsan degmada Baki. Waxaanu tacsidaa u diraynaa qoysaskii, qaraabadii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen saddexdaa muwaadin. Waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii fardowsa ka waraabiyo, dhammaanteen-na inuu samir iyo iimaan innaga siiyo. Waxaanu cambbaaraynaynaa falkaa foosha xun ee lagu dilay saddexdaa muwaadin. Waxa aanu xukuumadda iyo hay’adaha amniga u soo jeedinaynaa in gacan-ku-dhiiglayaashaas la soo qabto oo sharciga la horkeeno.”
Sidaa ayuu yidhi Cabdiraxmaan-Cirro.
Waxaanu Guddoomiyaha Wakiillada oo hadalkiisa sii wataa intaa ku daray oo uu yidhi; “Waxa kale oo aanu baaq nabadeed u diraynaa shacniga deegannadaas ku nool dhammaantood gaar ahaan deegaankii Baki ee ay ka dhacday dhibaatadadaasi. Shacbiga ku nool gabolada Gabiley iyo Awdal waxa aanu leenahay imtixaankii labaad weeye, kii hore waynu ku guulaysan-nay….insha’alaahu kanna waynu ku guulaysan doonaa. Shacbiga waxa aanu ugu baaqaynaa nabadgelyada guud iyo amniga inaynu wada ilaalino. Waxa aanu ku celinaynaa hay’adaha ambigu inay sida ugu dhaqsaha badan tallaabo uga qaadaan oo ay gacan-ku-dhiigleyaashaana soo qabtaan.”
Md. Cabdiraxmaan-Cirro waxa uu bulshada deegaannadaas ugu baaqay inay nabadgelyadooda ilaashadaan oo aanay wax qas ah oo amniga wax yeelaya ku kicin ee ay arrinta foosha xun ee dhacday wax ka qabashadeeda u daayaan dawladda, isaga oo dawladdana ka codsaday inay waajibkeeda ka gudato oo ay gacanta ku soo dhigto dadka dilkaa geystay.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo amar ku bixiyey in gacanta lagu soo dhigo Dablay Dad rayid ah Xalay Mir ku dilay
Next articleXisbiga KULMIYE oo Cambaareeyay fal sadex nin lagu dilay Deegaanka seemaal